स्त’न को आकार र यौ’न आनन्द के सम्बन्ध छ त ? – News Nepali Dainik
स्त’न को आकार र यौ’न आनन्द के सम्बन्ध छ त ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १८, २०७७ समय: २२:२५:२०
महिना शुरु हुन पाउँदैन थियो कि श्रीमान्को लिस्ट आइहाल्दथ्यो । म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्दथेँ जुन उद्देश्य लिएर म त्यहाँ पुगेकी, त्यो त पूरा गरौँ । यसरी फाल्तु खर्च किन गर्ने । तिमी तीनचार वर्ष बसिहाल्छ्यौ, हाम्रा
योजनाहरू पूरा गर्न पैसा त भइहाल्छ नि, …
।।मैले अब पैसा पठाउँदा श्रीमानलाई भन्न थालिसकेकी थिएँ पैसा बचत गर्नु ल भनेर । एक दिन श्रीमान्ले फोनमार्फत् मलाई भन्नुभयो, साथीहरूले मिलेर एउटा १० + २ सम्म पढाई हुने स्कूल चलाउने रे । हामीलाई पनि पैसा हाल्न भनेका छन्, तिमी त्यहाँबाट ऋण गरेर भए पनि मलाई १० लाख पठाइ देऊ न । स्कूलमा लगानी गरेपछि त आम्दानीको राम्रो स्रोत भइहाल्दछ नि, अनि त दुःखका दिन सकिन्छन् कि ।
अब त्यो घर पनि गयो भने त बस्ने बास पनि हुँदैन भनेर मैले छोराछोरीलाई मामाघर पनि नजाओ, कोठा नछोड भनेँ । यसैबीचमा छोरीले एस। एल। सी। पास गरिन् ।
मलाई ज्यादा पीर छोराको थियो, कुलतमा लाग्ने पो हो कि भन्ने । मेरो त सब बर्बाद भैसकेको थियो । मलाई आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो भैरहेको थियो । विवाह गरेको दिनदेखि अहिलसम्म मेरा श्रीमान्ले मलाई गरेको माया, मसित सरसल्लाह, भावी योजना सबै मेरा सामु सिनेमाझैँ नाचिरहेका थिए । म इजरायल आएको चार वर्ष भयो, छोराछोरी दुवै कलेजमा पढ्दैछन् । घरमा बाबु र सानीआमालाई आउन दिएनन् ।
Last Updated on: March 2nd, 2021 at 10:25 pm
११२० पटक हेरिएको